चीनसँग लफडा हुँदा सुष्माले नेपालसँग यसरी मागिन सहयोग, महराले पूरा गरिदिए ! – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / चीनसँग लफडा हुँदा सुष्माले नेपालसँग यसरी मागिन सहयोग, महराले पूरा गरिदिए !
चीनसँग लफडा हुँदा सुष्माले नेपालसँग यसरी मागिन सहयोग, महराले पूरा गरिदिए !
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर August 12, 2017	Comments 138 Views
काठमाडौं, २८ साउन । सधै नेपाललाई सहयोगको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको दक्षिण छिमेकी भारतले भर्खरै ठूलो सहयोग मागेको छ ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को १५औं विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन विहिबार काठमाडौं आइपुगेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफ्नो भारतीय दूतावासका कर्मचारीमार्फत नेपाल सरकारसँग विशेष सहयोग मागेकी हुन् ।
त्यो सहयोग हो बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका भुटानी विदेशमन्त्री दाम्चो दोर्जीसँग भेटवार्ताको समय । चीन र भुटानको सीमा दोक्लामलाई लिएर चीनसँग बढ्दो तनावका बीच सुष्माले काठमाडौं आएको मौकामा भुटानका विदेशमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने इच्छा राखिन् र दोक्लाम प्रकरणमा भुटानलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने उनको स्वार्थ थियो ।
त्यसैकारण कारण विहिबार काठमाडौं ओर्लिएकी सुष्माले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएर भुटानी विदेश मन्त्रीसँग साइड लाइनमा भेटवार्ता गर्ने समय मिलाइदिन आग्रह गरिन् । भारतले सहयोग मागेपछि परराष्ट्रका अधिकारीले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्ण महरासँग सल्लाह गरी शुक्रबारका लागि समय मिलाइदियो ।
शुक्रबार होटल सोल्टीमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले भुटानका विदेशी मन्त्री दाम्चो दोर्जीसँग साइड लाइनमा वार्ता गरिन् । दोक्लाम लगायत विषयमा भएको वार्ता सकारात्मक रह्यो । भुटान भारतको पक्षमा जस्तो देखिएको कुरा स्रोतबाट थाहा हुन आयो । यसरी परराष्ट्रमन्त्री महराले सुष्माको माग पूरा गरिदिए ।
यसरी बिमस्टेक बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले भुटानलाई आफ्नो पक्षमा पारेर मौकाको फाइदा उठाइन् ।
दोक्लम क्षेत्रलाई लिएर पछिल्लो समय चीन र भारतबीच तनाव बढेको छ । दोक्लममा भारत र चीनका सेना आमनेसामने भएका छन् । चीन र भुटानको सीमामा पर्ने दोक्लमको केही भाग चीनको नियन्त्रणमा छ भने केही भुटानको । चीन र भुटान दुवैले दोक्लम क्षेत्रलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
Previous: बाढीको बबण्डरः २३ को मृत्यु, ४ बेपत्ता झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट जलमग्न
Next: भारतले कोशीको ढोका खोल्न मानेनन, अटेर गरेको गरै